राष्ट्रपति कंकाल हुँदा देश बन्ला? – newskiran.com
राष्ट्रपति कंकाल हुँदा देश बन्ला?
Posted By : newskiran.com Posted On : 2019-11-30 11:56 pm Posted On : 2019-11-30 11:56 pm
आफूलाई कंकाल नबनाई देश नबन्ने सोच भएका राष्ट्रपति उरुग्वेका हुन् भन्दा कसैलापत्यार नलाग्ला । यो फोटो उरुग्वेका पूर्ब-राष्ट्रपति जोस मुजिका को हो । उनी उरुग्वेका राष्ट्रपति छँदा आफुलाई कंगाल बनाएर देशलाई सफल र सबल राष्ट्र बनाएका थिए।
साउथ अमेरिकी देश उरुग्वेका राष्ट्रपति जोस मुजिका विश्वको सबै भन्दा गरिब राजनेता भनेर चिनिन्छन् । देशको राष्ट्रपति हुँदा पनि सादा जीवन बिताउने मुजिकाको नाम अहिले पनि चर्चामा छ।मुजिका राष्ट्रपति रहँदा आमजनता झैं सादा जीवन बिताएका थिए भनिन्छ।
जोस मुजिका कुनैबेला टुपामारोस गुरिल्लाको सदस्य थिए । यो संघसंगठन क्यूबाको क्रान्तिसँग प्रेरित एक वामपन्थी सशस्त्र संघसंगठन थियो । देशमा क्रान्तिको दौरान मुजिकालाई सात पटक गोली हानिएको थियो।
चौध बर्ष जेलमा बिताएपछि उनले उरुग्वेमा तानाशाही ढल्यो र जोस मुजिका बिस्तारै बिस्तारै राजनीतिमा होमिए ।धेरै बर्षको संघर्ष पछि मुजिका २०१० तिर उरुग्वेका राष्ट्रपति बने ।
२०१० देखि २०१५ सम्ममा जोस मुजिकाले उरुग्वेलाई तीब्र विकास, सुशासन र समृद्धि दिएर देशलाई सबल राष्ट्र बनाएर राजनीतिबाट उनले सन्यास लिएका थिए ।
जोस मुजिका राष्ट्रपति भवनमा नबसेर दुई जना सुरक्षागार्ड सहित आफ्नै दुई कोठे जस्तापाताले छाएको घरमा बस्ने गर्दथे। उनी आफ्नो काम आफै गर्थे। घरको काममा पानी भर्ने, लुगा धुने मुजिका आफ्नो जीवनयापनका लागि आफै खेती गर्ने गर्दथे । खेतीमा प्रयोग हुने ट्याक्टर पनि आफै चलाउने गर्थे भने ट्याक्टर बिंग्रदा मेकानिकको काम पनि आफै गर्थे । मुजिका र उनका पत्नी फुलको खेती गरी आयआर्जन गरेर घरको खर्च चलाउँथिन्।
जोस मुजिका आफ्नो तलबको ९०% दान दिने गर्दथे ! उनले पाउने तलब १३,३०० डलरमा १२,००० डलर गरिबलाई दान दिन्थे भने ७७५ डलर सानो खुद्रा कारोबार गर्ने ब्यापारी लाई दिने गर्दथे ! राष्ट्रपति हुँदा उनलाई सबै सुबिधा प्रयोग गर्न सबैले आग्रह गर्दथे तर ती सेवा सुबिधा लिन कहिले मान्दैनथे ! उनी आफ्नो कार्यलय जादा आउँदा पुरानै सानो गाडी चढ्ने गर्दथे।
जोस राष्ट्रपतिको कार्यकालमा हुँदा, बिरामी हुँदा पनि आफ्नै देशको सरकारी हस्पिटलमा लाइन लागेर उपचार गराउने गर्दथे तर हाम्रो देशका नेताको बिदेश उपचार गराउन जान्छन, अब यिनै हाम्रा नेता लाई महान सम्झेर जनता कतिन्जेल जयजयकार गर्ने छन्।यो सत्यलाई स्वीकार गर्ने गरौ र अझै पनि आफ्नो स्वार्थको लागि राजनीति गर्ने पदवीहरुलाई जयजयकार गर्न छाड्ने नीति ल्याउनुपर्छ भन्दा फरक नपर्ला देशलाई राखौ । राष्ट्रको पहिचान मासेर, राष्ट्र र राष्ट्रियता बलियो बन्दैन् तसर्थ हाम्रो राष्ट्रको पहिचान के थियो त्यसलाई बुझ्ने कोशिस गरौ समुदाय?
कोपिला खेलकुद दिवस् समापन
सडक निर्माणमा सुस्तता
प्याजको भाउ आधा मूल्यमा झर्दै
2020-01-11 newskiran.com 0
संसारको सस्तो पेट्रोलको मूल्य भेनेजुयलामा
2018-11-19 newskiran.com 0
नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा १.५ देखि२.८ ले गिरावट हुने : विश्व बैंक